from eunwoo instagram and kbs Sponsored
KBS ရုပ်သံလှိုင်းရဲ့ Discoveries in Life ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကနေ သူတို့ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုကို ထုတ်ဖေါ်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အဒါကတော ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ အမျိုးသားတွေကို ကြည့်ခြင်းက ကျောင်းမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်းရစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကိုတော့ သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသမီးတွေနဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
from eunwoo instagram The Jakarta Post
အဲဒီအမျိုးသမီးတွေကို ၁မိနစ်အတွင်းမှာ လူနဲ့နာမည်တွေ မှတ်နိုင်သလောက် မှတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကောင်လေးချောချောလေးတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ဥာဏ်ပြန်လည်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့တွေ ၄ခုထက်ပိုတဲ့ အဖြေမှန်တွေကို ဖြေပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဦးနှောက်လှိုင်းကို လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရုပ်ချောတဲ့ အမျိုးသားဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ ဦးနှော်က်လှိုင်းတွေက ပုံမှန်အချိန်ထက် သိသိသာသာ တက်ကြွနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြော လေ့လာတဲ့ ဌာနခေါင်းဆောင်ကလည်း ဒီအကြောင်းကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။
READပေါတောတောနေတိုင်း လျှော့မတွက်သင့်ပဲ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဒီလိုမျိုးပါ…. kbs kbs Sponsored
နောက်ထပ် ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ အဆိုအရတော့ ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့ ပုံကို ကြည့်ခြင်းက ဦးနှောက်အပေါ်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားတွေက ရုပ်ရည်လှပတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ သူတိုရဲ့ မှတ်ဥာဏ်က ဘာတိုးတက်မှုမှမရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမျိုးသားတွေက အာရုံထွေပြားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
KBS ရုပျသံလှိုငျးရဲ့ Discoveries in Life ဆိုတဲ့ အစီအစဉျကနေ သူတို့ရဲ့ ရှာဖှတှေရှေိ့မှုတဈခုကို ထုတျဖျေါတငျဆကျခဲ့ပါတယျ။ အဒါကတော ရုပျရညျခြောမောတဲ့ အမြိုးသားတှကေို ကွညျ့ခွငျးက ကြောငျးမှာ အမှတျကောငျးကောငျးရစနေိုငျတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးအရာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလလေ့ာမှုကိုတော့ သကျလတျပိုငျး အမြိုးသမီးတှနေဲ့ စမျးသပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီအမြိုးသမီးတှကေို ၁မိနဈအတှငျးမှာ လူနဲ့နာမညျတှေ မှတျနိုငျသလောကျ မှတျခိုငျးခဲ့ပါတယျ။ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ကောငျလေးခြောခြောလေးတှရေဲ့ ဓါတျပုံကို ကွညျ့ခိုငျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။မှတျဉာဏျပွနျလညျစဈဆေးတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့တှေ ၄ခုထကျပိုတဲ့ အဖွမှေနျတှကေို ဖွပေေးနိုငျပါတယျ။ ဒီလလေ့ာမှုကတော့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဦးနှောကျလှိုငျးကို လလေ့ာခဲ့တာဖွဈပွီး ရုပျခြောတဲ့ အမြိုးသားဓါတျပုံတှကေို ကွညျ့နတေဲ့အခြိနျမှာ ဦးနှျောကျလှိုငျးတှကေ ပုံမှနျအခြိနျထကျ သိသိသာသာ တကျကွှနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ဦးနှောကျနဲ့ အာရုံကွော လလေ့ာတဲ့ ဌာနခေါငျးဆောငျကလညျး ဒီအကွောငျးကို အတညျပွုပေးခဲ့ပါတယျ။
READပေါတောတောနတေိုငျး လြှော့မတှကျသငျ့ပဲ ထကျမွကျတဲ့ မိနျးကလေးတှဆေိုတာ ဒီလိုမြိုးပါ…. kbs kbs Sponsored
အရမ်းချစ်တယ်လို့ နွဲ့ဆိုးဆိုးပြီးပြောလိုက်တဲ့ Novem Htoo
နေတိုးရဲ့ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခုကို ပြောပြလိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့်
သားလေးက အပြင်သွားရင် မုန်းဖိုး ၁သိန်း ၂သိန်း လောက်ပဲတောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်
ဆေးကျောင်းတက်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်လေးကို ကူညီသွားမယ့် လင်းလင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ
အတွင်းပုတ်ပြီး သူတစ်ပါးကောင်းစားခြင်းကို မနာလိုတတ်သူတို့၏ လက္ခဏာ (၅) မျိုး
ဒိတ်ဒိတ်ကြဲဆယ်လီတွေကို ကျော်ပြီး Fans' Favourite Award ဆု ရရှိခဲ့တဲ့ Caster Shinelayz
အဂတိ လိုက်စားမှုဖြင့်် ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးမှ စာရေးမတစ်ဦး အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် (၄) နှစ်ချမှတ်ခံရ
ပရိသတ်ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံအတူ ရိုက်လိုက်မိရာက အကြံသမားနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ မေပန်းချီ
အင်​စတာဂရမ်​ Live မှာအချင်းချင်းစ​နောက်​ခဲ့ကြတဲ့ Chanyeol နဲ့ Baekhyun
ပြင်သစ်မှာနေတုန်းက အပေါ့သွားထားတဲ့ရေဗူးနဲ့ အပေါက်ခံရပြီး လူမျိုးရေးခွဲခြားခံခဲ့ရဖူးတဲ့ Daehan, Minguk, Manse
ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ကောလဟာလတွေကြောင့် ဘ၀ပျက်စီးလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Idol (၆) ယောက်
ကြည့်မိသူတိုင်း ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားစေမယ့် ဂွမ်ဇူးတိုက်စစ်မှူးရဲ့ လက်ဖျားခါချင်စရာသွင်းဂိုး